Ukpa | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | September 2019
Cedar mmanụ: ihe ọ na-enyere, ihe na-emeso, esi eji ma were
Nri akwukwo ndi mara ama obughi nani obi uto, kamakwa maka otutu nri, o bu ihe ezi uche dika iche na mmanu esi na nkpuru ndi a puta ga enwe kwa ihe bara uru. Ọzọ, anyị na-achọpụta ebe a pụrụ iji mmanụ sida na-eme ihe, nakwa n'ịlụso ọrịa ndị ọ ga-enyere aka.
Olee otú hazel si enyere ụmụ mmadụ aka?
Akwukwo nke hazelnut ma obu hazel bu ndi mara nke oma otutu ndi mmadu bi na Europe, Eshia na North America, ebe a na-enwe otutu ihe ndi bara uru. Na mgbakwunye na ụtọ uto na àgwà bara uru nke mkpụrụ osisi hazel (yana akwụkwọ ya, ogbugbo na ọbụna mgbọrọgwụ) nwere ụdị ọrịa. Ka a sịkwa ihe mere ndị nna anyị ji kwere na osisi a na-enye anwụghị anwụ ma nye ya ike karịrị nke mmadụ.
Hazelnut (Hazelnut) iche: foto na nkọwa nke osisi
A na - akpọ mkpụrụ osisi nke mkpụrụ 20 nke Hazel genus, nke bụ ezinụlọ Birch, ọtụtụ mgbe hazelnut, nnukwu hazelnut na Pontian hazelnut - ụdị dị iche iche. Ebe e kesara bụ Eurasia na North America, n'ókèala nke osisi coniferous forests ha na-etolite. Ojiji nke hazelnuts na ụlọ ọrụ maka mmepụta nke confectionery na sweets dịkarị.
Nutmeg - uru bara uru ma na-emerụ mkpụrụ nke nutmeg
A maara Nutmeg dị ka ose na-ewu ewu nke na-enwe ísì ụtọ dị mma, ihe ekpri ekpri na-ejikwa ya nri. Otú ọ dị, ndị a abụghị ezigbo ihe niile na-eme ka a mara ya - ọ chọtara ngwa na nkà mmụta ọgwụ (omenala na ndị mmadụ), cosmetology na perfumery. N'ime ihe a, anyị na-enye gị nlekwu anya na nutmeg na peculiarities nke ojiji.
Ịkọ ihe ubi ma na-elekọta walnuts
Site n'oge ochie ruo ugbu a, a na-akpọ ukpa "osisi nke ndụ". N'ihi ihe dị iche iche pụrụ iche na vitamin, micro na macro elements na ndị ọzọ bara uru bara uru, a na-eji mkpụrụ ọgwụ na-agwọ ọtụtụ ọrịa, weghachi ike nke ike, na-egbo agụụ. Iji saturate ahụ na ihe bara uru bụ ihe ole na ole na-akụ n'ụbọchị.
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Ukpa